नेपाल आज | ३० रुपैयाँ केजीको चामल जनताले ६५ हालेर कहिलेसम्म किन्नु पर्ने हो ? (भिडियोसहित)
३० रुपैयाँ केजीको चामल जनताले ६५ हालेर कहिलेसम्म किन्नु पर्ने हो ? (भिडियोसहित)
बिहिबार, ०६ बैशाख २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
बिमला खनाल, अध्यक्ष, कन्जुमर आइ नेपाल
अहिले उपभोक्ताको पक्षमा कुनै काम हुन सकेको छैन । खासमा अहिले अनुगमन नै रोकिएको छ । अहिले कुनै पनि निकायले अनुगमन गरेको छैन । बजार सच्चिने गरी अनुगमन गरिएको छैन । आजको दिनमा जे कमजोरी देखियो, फेरि फर्केर जाँदा अवस्था उस्तै छ ।
अनुगमनका लागि अनुगमन गरिँदाको प्रतिफल हो । अनुगमनका क्रममा दर्जनौंमा समस्या देखिन्छ । तर मुद्दा दर्ता दुई चारवटा मात्रै हुन्छ ।
उपभोक्ताहरु मूल्यमा, तौलमा, गुणस्तरमा ठगिएका छन् । व्यापार व्यवसाय चलाउनेहरु धेरैले दर्ता गरका छैनन् । अझै धेरैले मूल्यसूची राखेका छ्रैनन् । वस्तुमा लेभल समेत नराखी बिक्री वितरण भइरहेको छ । अनेक खालमा समस्या देखिएको छ । तर अनुगमन गर्ने निकायले अनुगमन मात्रै गर्छ ।
तीस रुपैयाँ केजीको चामल काठमाडौंका उपभोक्ताले ६५ रुपैयाँमा किनेर उपभोग गर्छन । भन्सार बिन्दुमा ३० रुपैयाँमा पाइँदो रहेछ । अब भन्नुस त । चीनीको कुरा उस्तै छ । ३० रुपैयाँमा पाइने चीनी ९० रुपैयामा किन्छौं हामी । मूल्य नियमन नियन्त्रण र विश्लेषण गर्नु पर्छ ।
छिमेकी मूल्यमा कति छ, यहाँको लागत कति हो, ढुवानी लागत कति हो भन्ने विश्लेषण गर्ने एक संयन्त्र आवश्यक छ । १० लिटरको पेट्रोल अटाउने मोटरसाइकलमा पम्पवालाहरुले १२ लिटर अटाइदिन्छन् ।
हामीले यो कुरा भनिरहेका छौं । यसबारेमा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।
व्यापारी, व्यवसायीहरु नैतिक चरित्रवान छैनन् । यसकारण अनुगमन आवश्यक भएको हो । सुशासन कायम भएको मुलुकमा पनि अनुगमन हुने गरेको छ ।
मातृका यादवको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा उहाँ भनेको सबै नेपालीको मन्त्री हो । आपूर्तिमन्त्रीले जनताको माग पूरा गर्नुपर्छ । सुन्नु पर्छ । अहिले उहाँ मन्त्री भएर आइसकेपछि हामीसँग छलफल गर्न कहिले पनि आउनु भएन ।
उहाँले बाहिर आइरहेको खबरहरुबारे सत्य थाहा छैन । उहाँ व्यापारीको चुंगलमा फस्नु भयो भन्ने हल्ला छ । हामी भन्न चाहन्छौं कि ‘अनुगमन फुकाइदिनु पर्‍यो ।’
उपभोक्ताबारे सुन्ने, उनीहरुको समस्या बुझ्ने चिन्ता सरकारको छैन । नेपालमा सबैभन्दा बढी कोही ठगिएको छ भने उपभोक्ता नै हो ।
न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरेको क्रान्तिकारी छविलाई अहिले आएर मातृका यादवले समाप्त पार्न लाग्नु भएको होइन ? भन्ने पनि देखिएको छ ।
मैले आजसम्म जीवनमा कुनै पनि किशिमको शुभलाभको काम गरेका छैन । उपभोक्ताअधिकारकर्मीहरुविरुद्ध पनि बेला बेला व्यापारीसँग मिलेको आरोप लाग्छ । तर हामीले त उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने भनेर कसम खाएर संघर्ष गरिरहेका छौं । हाम्रो अभियान स्वार्थप्रेरित छैन । हामीले कसैको एक रुपैयाँ लिएको छैन । त्यस्तो कतै भएको रहेछ भने कारबाही गरियोस भन्ने मेरो माग हो । त्यस्ता केही अधिकारकर्मी छन् जो व्यापारीसँग मिलेका छन् । उनीहरुलाई कारबाही पनि भएको छ ।
हामी उपभोक्ताहरुको हरेक बिहान बिषबाट सुरु हुन्छ । चियाको चुस्कीसँगै हामीले मन्द वीष सेवन गर्न थाल्छौं । विषादी मिसिएको कृषिजन्य वस्तुमा अत्यधिक विषादी मिसाइएको छ । यसका कारण मानिसहरु बिरामी भइरहेका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या आइरहेको छ । मानिसहरु बिरामी भएर अस्पताल गइरहेका छन् । अस्पतालमा त घरखेत लिलाम हुन्छ । एउटा बिरामी दुई दिन अस्पताल बस्दा १ लाख २५ हजारसम्म तिरेको पनि घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
औषधिको मूल्य पनि परल मोलभन्दा दुई तीन सय प्रतिशत बढी लिइएको छ ।
धारामा पानी आउँदेन । बिल तिर्नु पर्छ । हावामा धुलो र धुवा मिसिएको छ । सफा हावा पनि लिन पाइँदैन । विद्यालयमा लुट छ । अस्पतालमा घरखेत जान्छ । सार्वजनिक बसमा यात्रु भएर होइन पशुभएर यात्रा गर्नु पर्छ । सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा लिन होइन, त्यहाँका कर्मचारीलाई मालिक मान्नुु पर्ने अवस्था छ । कर्मचारीहरुमा आफूहरु सेवक हौं भन्ने भावना नै छैन ।
तरकारीमा, अन्नमा, पानीमा, माछामासुमा, लत्ताकपडामा, इलेक्ट्रोनिक्स, निर्माण सामाग्री, अटोमोबाइल सबैतिर खराब छ अवस्था । यस्ता दूरावस्थामा नेपाली जनता बाँचिरहेका छन् । जीवन नै अस्तव्यस्त भइसकेको छ । सुधार कहिले त ?
यो अन्यायबाट स्थानीय सरकारले केही गर्ला भन्ने थियो । तर केही काम गर्न सकेनन् । त्यसमाथि अनुगमन पनि रोकेका छन् ।
(अध्यक्ष खनालसँग भएको अन्तर्वार्तामा आधारित)
अनुगमन बिमला खनाल